CMCS : Asa fanarenana - CMCS - CMCS CMCS : Asa fanarenana - CMCS -
Catégorie : Ny vaovao
CMCS : Asa fanarenana
Les travaux dans les locaux du CMCS évoluent
Nanomboka ny volana jona 2019 teo ny asa fanatsarana, fanarenana ary fanavaozana ny fotodrafitra eo anivon’ny Foibe Malagasy momba ny Fary sy ny Siramay. Nanomboka ny taona 2013, rehefa samy nanototra ny tany manodidina azy ny mponina, dia dobo rano foana ny biraon’ny CMCS, rehefa amin’ny fotoanan’ny fahavaratra. Mandroso tsara ny asa ankehitriny ary manaraka tsara ireo fenitra notakian’ny mpanao maritranon’ny prezidansa, izay manara-maso akaiky ny fizotra ny asa
Ny rindrina sy ny fototra no tena hanitana fahasimbana vokatry ny hamandoana sy ny fivadibadiky ny toetrandro. Nisy ny asa natao farak’izay maika arak’izany. Ny fanoloana ireo varavaram-be sy varavaran-kely koa dia tafiditra tao anatin’ny asa tsy maintsy natao. Natao koa ny asa fanamainana sy fanaovana tatatra fivoan-drano. Nohararaotina koa moa ity asa ity anavaozana ireo takelaka fanondroana ny toeran’ny CMCS.
Ny hamandoana sy ny fahasimbana moa dia olana mpitranga amin’ny toeram-piasana toy ity tranga nisy tamin’ny biraon’ny Foibe Malagasy momba ny Fary sy ny Siramamy ity eto Tsimbazaza ity. Miankina betsaka amin’ny fahatsaran’ny toeram-piasana ny ahafahana mandroso manao zavatra maro entina hampivoarana ny seha-pihariana siramamy
- Ny vokatra mahakasika ny alikaola tao anatin’ny dimy (5) taona farany 2014 – 2019 -
- Ambilobe : Nidina ifotony ny Tale Jeneraly sy ny Talé tecknika -
Fihariana siramamy : nahazo Talé Jeneraly vaovao ny CMCS
Ambilobe : Nidina ifotony ny Tale Jeneraly sy ny Talé tecknika
Choose a language Français Malagasy